Kenya waxay soo tabisay 460 kiis oo cusub oo ah COVID-19 heerkaas oo wali sii kordhaya – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Kenya waxay soo tabisay 460 kiis oo cusub oo ah COVID-19 ...
Kenya waxay soo tabisay 460 kiis oo cusub oo ah COVID-19 heerkaas oo wali sii kordhaya
Tirada kiisaska loo yaqaan ‘coronavirus virus’ ee Kiiniya ayaa gaadhay ilaa 140,000 iyada oo wadanku uu wali la dagaalamayo mawjad saddexaad oo infekshin ah.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa soo warisay 460 xaaladood oo cusub Isniintii taas oo wadarta culeyska ka dhigeysa 139,448. Tirada kiisaska ka imanaya muunad ahaan ilaa 2,753, heerka waxtarka ee qaranku wuxuu ahaa 16.7 boqolkiiba, in ka badan saddex jeer heerka Ururka Caafimaadka Adduunka.
1,590 bukaan ayaa hada la dhigey xarumo caafimaad oo kaladuwan dalka oo dhan, halka 5,998 bukaan ay kujiraan guri go’doomin iyo barnaamij daryeel, sida ay sheegtay wasaarada.
Tirada dhimashada, oo sii kordheysay intii lagu jiray mowjaddii saddexaad, ayaa gaartay 2,244 ka dib markii la soo sheegay 20 dhimasho dheeraad ah.
“20 dhimasho ayaa la soo sheegay, (1) 24-kii saac ee la soo dhaafay, 10 bishii ugu dambeysay & 9 ayaa ah warbixinno dhimasho oo soo daahay oo ka yimid xisaabiyihii diiwaanka xarunta. Khasaaraha dhimashada ayaa gaaraya 2,244, ”ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaarada.
Tirada ka soo kabashada ayaa sidoo kale kor u kacday ilaa 94,361 kadib markii 178 bukaan ay ka bogsadeen cudurka; 99 ka socda xarumaha caafimaadka iyo 79 ayaa ka socda barnaamijka Daryeelka ku-saleysan Guryaha iyo Go’doonka.
282,518 qof ayaa la tallaalay tan iyo markii ay dawladdu si rasmi ah u bilawday olole tallaal oo bilaash ah dalka oo dhan bishii Maarso 5 ka dib markii ay heleen hal milyan oo ah tallaalka AstraZeneca-Oxford COVID-19, iyada oo loo sii marayo xarunta COVAX.
Mowjadda saddexaad ee COVID-19 ee ku faafaya waddanka ku yaal Bariga Afrika ayaa keentay in xarumaha caafimaadka ay buux dhaafiyeen isla markaana dowladda ay xayiraad cusub ku soo rogtay shan gobol, oo ay ku jirto caasimadda Nairobi, kuwaas oo loo qoondeeyay goobo kulul.
Previous article40 ayaa lagu dilay isku dhacyo rabshado wata oo ka dhacay Suudaanta koofureed
Next articleVladimir Putin ayaa saxeexay sharci u ogolaanaya inuu xukunka sii hayo ilaa 2036